कोही नहार्ने यो निर्वाचन- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ३, २०७४ टीकाराम भट्टराई
बारा जिल्लाको त्यो समाचारअनुसार राजपाका नेता मनिश सुमन निजगढ आसपासको पहाडी बस्तीमा र एमालेका नेता अच्युत मैनाली सीमा क्षेत्रको मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा परस्पर विपरीत विचार अघि सारेर मतदाता रिझाउँदै थिए । मधेसी नेता, आफ्नो दल पहाडी विरोधी नभएको र एमाले नेता आफ्नो दल नै मधेसको समग्र विकासको अगुवा भएकाले मधेस विरोधी नभएको बताइरहेका थिए । यसरी नै मधेसका अन्य ठाउँमा पनि आज मधेसी समुदाय पहाडी बस्तीमा र पहाडी समुदाय मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा निर्धक्कसाथ जनताको मन रिझाउन व्यस्त छन् । यो निर्वाचनको यही नै सबभन्दा सुखद पक्ष हो र लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष पनि । यो निर्वाचनले हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई पुन: एउटै धागोमा बाँध्दै छ । विभाजनका कृत्रिम रेखा धुमिल हुँदै छन् ।सद्भावको सन्देश
प्रकाशित : मंसिर ३, २०७४ ०८:४७
मंसिर ३, २०७४ अतुल मिश्र
काठमाडौं — सन्तुलित खाना नपाउँदा ५ वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका पुड्का हुने गरेका छन् । नेपाल जानसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा आवश्यक पोषण नपाउँदा बालबालिकाको उचाइ उमेरअनुसारको हुने नगरेको औंल्याइएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार एक सयमध्ये ३६ बालबालिकाको उचाइ उमेरअनुसारको छैन । सर्वेक्षणले सयमा १० बालबालिका ख्याउटे हुने गरेको र २७ जना कम तौलका हुने गरेको पनि देखाएको छ । एक सय जनामा सर्वेक्षण गर्दा आवश्यकभन्दा बढी तौल भएका एक बालबालिका पाइएको पनि सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कुपोषणले शारीरिक मात्र नभई मानसिक क्षमतामा समेत ह्रास ल्याउने उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका २ हजार ४ सय ९१ बालबालिकाको उचाइ र तौलको विश्लेषण गरी यो नतिजा निकालिएको हो । सर्वेक्षणले प्रदेश ६ मा ५५ प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसार कम उचाइ भएको देखाएको छ । प्रदेश ५ मा ३९, प्रदेश २ मा ३७, प्रदेश ७ मा ३६, प्रदेश १ मा ३३ र प्रदेश ३ र ४ मा २९ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या देखिएको छ । सर्वेक्षणले उच्च आय भएको वर्गमा १७ प्रतिशत तथा कम र निम्न आय भएको वर्गमा ४९ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ नपुगेको देखाएको छ । विशेषज्ञका अनुसार शिशुको पहिलो एक हजार दिनमा अपर्याप्त पोषण र निरन्तर हुने रोग संक्रमणले गर्दा बालबालिकामा अपरिवर्तनीय पुड्कोपना (स्टन्टिङ) आउँछ ।
पुड्कोपना भएका बालबालिकामा पछि बढी तौल बढ्ने वा मोटो हुने जोखिमसमेत रहन्छ ।
कुपोषणले मानसिक विकासमा समेत असर पार्ने र मस्तिष्कको तीक्ष्णता प्रभावित हुने विज्ञ बताउँछन् । ‘मस्तिष्कको विकास मुख्य रूपमा पाँच वर्षको उमेरसम्म हुन्छ,’ स्नायु शल्य चिकित्सक डा. वसन्त पन्त भन्छन्, ‘पोषणको कमीले पुड्कोपना मात्र आउँदैन, यसले मानसिक क्षमतालाई समेत जीवनभर प्रभावित गर्छ ।’
मस्तिष्कको ८० प्रतिशत विकास २ वर्षको उमेरसम्म हुने भएकाले त्यो समयमा कुपोषण भएमा मस्तिष्कको विकासमा असर पर्ने र यो कमी जीवनभर पूरा हुन नसक्ने डा. पन्त बताउँछन् । नेपालीहरू वंशाणुगत रूपमा पुड्को नरहेको उल्लेख गर्दै डा. पन्त भन्छन्, ‘शारीरिक र मानसिक विकासका लागि बाल्यकालमा चाहिने उपयुक्त पोषण अभावले पुड्को र औसत मानसिक क्षमताका हुनेको संख्या ठूलो छ ।’
बाल स्वास्थ्य महाशाखाअन्र्तगत पोषण शाखाका प्रमुख रामकुमार पोखरेल पुड्का आमाबुबाका सन्तान पनि पुड्को हुन्छन् भन्ने मान्यता गलत भएको बताउँछन् । ‘५ वर्षसम्ममा उपयुक्त पोषण पाएमा पुड्का आमाबाबुका सन्तान पुड्का हुँदैनन् ।’ विशेषज्ञका अनुसार कुपोषणले पुड्का भएकाहरूमा मुटु रोग, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको जोखिम समेत बढी हुन्छ ।